Fomba magnesium - Tontalin'ny vanim-potoana
Magnesium Chemical & Physical Properties
Fomba fanao amin'ny Magnesium
Weight atomic: 24.305
Fikarohana: Fantatra amin'ny maha-singa iray an'ny Black 1775; Nataon'i Sir Humphrey Davy 1808 (Angletera)
Configuration Electron : [Ne] 3s 2
Ny teny hoe: Magnesia , distrika iray ao Thessaly, Gresy
Ny fananana: Ny magnesium dia manana teboka 648.8 ° C, teboka 1090 ° C, ny hafanana manokana amin'ny 1,738 (20 ° C), ary ny fahamendrehana 2. Ny metaly magnesium dia hazavana (iray ampahatelina kokoa noho ny aluminium), volafotsy-fotsy , ary henjana.
Ny metaly dia mangatsiaka kely amin'ny rivotra. Miparitaka be ny magnesium manify amin'ny rivotra amin'ny rivotra, mirehitra amin'ny lelafo fotsy.
Fampiasana: Magnesium dia ampiasaina amin'ny fitaovana pyrotechnic sy fitaovam-piadiana. Mifanaraka amin'ny metaly hafa izy io mba hahatonga azy ireo ho maivana sy mora kokoa, ary misy fampiharana any amin'ny indostrian'ny fiaramanidina. Ny Magnesium dia ampiana fitifirana maro. Izany dia ampiasaina ho toy ny mpandatsaka vola amin'ny fanomanana uranium sy metaly hafa izay voadio amin'ny saline. Ny Magnesita dia ampiasaina amin'ny refactories. Ny hydroxide magnesium (ronono magnesia), sulfate (salope Epsom), chloride, ary citrate dia ampiasaina amin'ny fanafody. Manana fanafody mahazatra ny organiques magnesium. Ny magnesium dia tena ilaina amin'ny famokarana zavamaniry sy biby. Ny chlorophyll dia porphyrine magnesium centre.
Loharano: Ny Magnesium no singa manan-danja indrindra indrindra eto an-tany. Na dia tsy hita aza io natiora io, dia hita ao amin'ny mineraly ny magnesite sy ny dolomite.
Ny metaly dia azo avy amin'ny electrolysis misy solifara magnesium voajanahary avy amin'ny ala sy ny ranomasina.
Weight atomic : 24.305
Sokajin-teny filamatra: Alkaline Earth Metal
Ny isotope: Ny magnesium dia manana isotope fantatra 21 avy amin'ny Mg-20 ka hatramin'ny Mg-40. Ny magnesium dia misy isotope: 3 Mg-24, Mg-25 ary Mg-26.
Magnesium Data Data
Density (g / cc): 1.738
Ny endriky ny: metaly maivana sy malefaka ary volafotsy
Radioma Atomika (pm): 160
Atao Atomika (cc / mol): 14.0
Ionic Radius : 66 (+ 2e)
Heziny manokana (@ 20 ° CJ / g mol): 1.025
Famonoana hafanana (kJ / mol): 131.8
Temperatura Debye (K): 318.00
Pauling Negativity Nombre: 1.31
Fiarovana voalohany (kJ / mol): 737.3
Firenena Oxidation : 2
Fiatoana C / A: 1.624
CAS Registry Number : 7439-95-4
Ny magnesium dia nantsoina hoe 'magnium' tany am-boalohany avy amin'i Humphrey Davy taorian'ny nanilany ny singa avy amin'ny magnesia, fantatra ankehitriny ho oxides magnesium.
Ny Printsy Nobel ho an'ny Chemistry tamin'ny 1915 dia nomena an'i Richard Willstätter noho ny asany tamin'ny klôrafyll ary ny famantarana ny magnesium dia ny atôma afovoany ao amin'ny rafitra.
Ny sira Epsom dia singa magnesium, sulfate magnesium (MgSO 4 ).
Ny Magnesium no singa 10 lehibe indrindra amin'ny vatan'olombelona .
Ny Magnesium dia handoro amin'ny gazy nitroka madio sy gazy karbonika madio.
Ny Magnesium no singa fahadimy mahazatra indrindra hita ao anaty ranomasina.
References: National Laboratory of Los Alamos (2001), Company Crescent Chemical (2001), Handbook of Chemistry (1952), Handbook of Chemistry & Physics (18th Ed.) International Atomic Energy Agency ENSDF (Oct 2010)
Aiza ny volafotsy hita eo amin'ny latabatra vanim-potoana?
10 Facts Argon - Ar na Atomic Number 18
Fakan-tsary momba ny atomika 8
10 Facts Titanium
Inona avy ireo singa ao amin'ny vatan'olombelona?
Lisitry ny metaly fototra
Lisitry ny Noble Gases
Atomic Number 13 - Facts Aluminium Interest
Nahoana isika no mamaly ny Apolosy amin'ny Halloween?
Ny fanontana nataon'i Edison amin'ny fonontonina
'Fomba iray ho an'i India' Fanontaniana sy hianarana
Fiantohana fanavaozana fiara
Ny toe-draharaha ankehitriny ao Iraka
Ny fomba famolavolana fehezanteny iray mandaitra
Ireo teny fohy amin'ny ankapobeny dia avy amin'i Will Ferrel sy Jon Favreau's "Elf"
Inona no nampitandremana azy talohan'i Vatikana II?
À vs. De: Fiteny frantsay
Valan-javaboarin'i Canyonlands: Toeram-pijerem-pahagagana ny lanitra
Ahoana ny fametrahana "Ajouter" (hanampiana)
Ny raharaha persona
Venus Libra fitiavana fifandraisana
Tiro, Libanona: sary & sary
Famaritana ny metatra sy ny resadresaka
Ahoana ny fifandraisana amin'ny tambajotram-pahitalavitra
Fizakan-danja lehibe momba ny jeografia
Ny fomba fijery momba ny fanafody ho an'ny kanseran'ny nono